laacib » Macalinka Napoli Maurizio Sarri oo galmo ka dalbaday gabar wareysi ka qaadeysay, ka dibse maxaa dhacay?
Macalinka Napoli Maurizio Sarri oo galmo ka dalbaday gabar wareysi ka qaadeysay, ka dibse maxaa dhacay?
Tababaraha laacibkii Napoli Maurizio Sarri kaasoo lala xiriirinayey inuu bedel u noqon doono tababaraha Arsenal Arsene Wenger ama dhiggiisa Chelsea Antonio Conte dhammaadka xilli ciyaareedkaan ayaa fadeexo bartanka ka galay.
Tababare Maurizio Sarri ayaa wuxuu jawaabo jinsiga taabanaya siiyey gabar joornaaliiste ah oo lagu magacaabo Titti Improta, inkastoo uu markii dambe raalligeliyey.
Napoli ayaa barbardhac 0-0 ah la gashay laacibkii Inter Milan, ka dibna gabadha lagu magacaabo Titti Improta ayaa weydiisay tababare Maurizio Sarri haddii ay hoos u dhaceen fursadaha ay kula guuleysan karaan horyaalka Serie A maadaama ay Juventus haatan hogaanka hal dhibic uga qabatay.
59 sanno jirkaan oo aan faraxsaneyn ayaana gabadhaas siiyey jawaabo jinsiga taabanaya, wuxuuna yiri: “Waxaad tahay gabar qurux badan, kumana dhihi karo aan sariir kula wadaago laba sabab dartood.”
Isagoo aan labadaas sabab sharrixin, tababare Maurizio Sarri ayaa durba dareemay inuu qalad galay, ka dibna wuxuu raalligeliyey gabadhaas joornaaliistaha ah oo uu dhalay daaficii hore ee Napoli Gianni Improta kaasoo 1970meeyadii usoo ciyaaray kooxdaan.
Improta ayaa daaha ka qaaday inuu tababare Sarri raalligeliyey, sidoo kalena xabadka geliyey una sheegay inuu ka xun yahay jawaabta aan habbooneyn ee uu siiyey.
Ahmed Jaangoan – Qoraa, Soosaare, Fallanqeeye, Wariye Sports.